Shakhsi iyo Qalbi Dareem Adiga Ayaa Mahadsan | Martech Zone
Shakhsi iyo Qalbi-dareemid Adigaa Mahadsan
Axad, Disembar 24, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tani waa xilli aan caadi aheyn shaqadayda internetka. Maanta balooggayga ayaa lagu xusay labadaba John Chow iyo Seth Godin's baloog Aniguna dhawaan baan ahaa ka mawduuc ku saabsan gelitaanka blog aad u sasabasho badan oo ku saabsan barta Pat Coyle! Toddobaadkii hore, Mike at Isweydaarsiyada wuxuu ahaa mid naxariis leh oo igu xuso aniga "Z-lister". Dhiirrigelinta naf-hurnimada ah ee uu igu sameeyay ayaa ka dhigtay boggeyga in lagu xusay in ka badan 70 qof oo kale, oo ay ku jiraan sheegashada maanta ee Seth Godin.
Bilooyinkii ugu dambeeyay, balooggeygu cirka ayuu isku shareeray gaadiidka iyo maamulka.
Dhamaan kobocaani runti kama imaanin khibradeyda. Waxay ka timid rabitaankeyga qabashada iyo baahinta macluumaadka iyo aad wadaagista aad aqoon iyo khibrad. Waxaan jeclaan lahaa fursad aan ugu mahadceliyo midkiin kasta. Xaqiiqdii, haddii aan sameeyo safar kasta sanadka soo socda aniga oo shaqo la socda, mid ka mid ah himilooyinkeygu waa inaan sidaas sameeyo. Waan kula socodsiin doonaa meeshaan tegayo, waxaanan la kulmi doonaa cabitaan ama kafee. Haddii aad imaaneyso Indy, fadlan haka waaban inaad ii sheegto.
Mararka qaar balooggu wuxuu cunaa inbadan oo maalintayda ah, laakiin waxkasta oo adiga iyo aniga aan qabanayno waxay umuuqdaan kuwa shaqeynaya:
Waxaan isku dayaa inaan ku bixiyo mowduuc asal ah inta badan qoraaladeyda. Habkaas mareeggaygu qayb kama aha doodaha ama si fudud ugu celcelinta wararka, waa waxa ay sheekadu ku saabsan tahay. Taasi waa hawl adag, laakiin waa la bixiyaa.
Mar kasta oo aan arko tixraac ku saabsan balooggeyga bog kale ama baloog, waxaan isku dayaa inaan u jawaabo oo aan u mahadceliyo qofka - xitaa haddii qoraalladoodu aysan fiicnayn (gaar ahaan haddii aysan ahayn). Qiimaha wuxuu ku jiraa dooda. Marwalba (ok, marar dhif ah) ma saxsana, si kasta.
Waxaan kaqeybqaataa waxqabadyada blogging group. Haddii Problogger kama mid aha jadwalkaaga qorista maalinlaha ah, sidaas ka dhig. Darren wuxuu inta badan ku xejiyaa boggaga mashruucyo kooxeed. Dhammaantood waxay helayaan fiiro gaar ah iyo soo-gaadhis.
Waxaan la wadaagayaa waxyaabo aan bartay.
Waxaan isku dayaa inaan caawiyo qof kasta oo i weydiiya. Waxay igu dhacdaa dhibaato waqti badan, laakiin waa waxa ay tahay inaan bixiyo. Waa 'hadiyaddayda', haddii aad rabto.
Waxaan mawduucyada ku xiraa qorayaasha kale. Haddii aan arko mowduuc wadahadal ah oo mid ka mid ah boggaga internetka ee aan akhriyaa uu khabiir ku yahay, marwalba waxaan isku dayaa inaan isku xiro labada. Maxay tahay shabakad loogu talagalay haddii aadan dhab ahaantii ka caawin doonin sameynta isku xirnaanta?
Waad sii wadaa inaad kobciso qoraalkayga.
Waxaan fadhiyaa kursiga Starbuck hadda. Markaan runta u hadlo, maanta wax yar baan hoos u dhacay oo carruurtayda lama joogo caawa ama berri. Waxay la qaadanayaan Christmas weyn hooyadooda & qoyskooda. Markii aan qorayay, waxaan ka helay emayl cusbooneysiin ah saaxiibkey, Glenn.
Waxay i xasuusisay in dadka kale ay wax badan hurayaan inta lagu jiro xilligan ciidaha. Runtii waxba iskama hurayo… oo aan la fadhiyo Miiskeyga Mocha ee ku yaal guri qaxwo macaan. The Berryman qoyskooda oo dhan waxay u kaxeeyeen safar Mozambique si ay uga caawiyaan waxbaridda iyo faafinta ereyga wanaagsan. Ma qiyaasi kartaa? Waxaan ixtiraam aan caadi aheyn u hayaa kuwa wax badan bixiya.
Waxaana xasuustaa ciidamadeena. Waxaan ku maqnaa dibedda 9 bilood intii lagu gudajiray Duufaanta Lama-degaanka / Duufaanta lamadegaanka oo waxaan ku qaatay dabaaldegyada Kirismaska ​​Gacanka Beershiya. Waa wax dhib ah in la maqnaado inta lagu jiro xilli inta badan qoysaska isu kaxeeya. Ilaahey ha barakeeyo ciidamadeena, qoysaskooda, iyo qoysaskaas qasaaraha badan soo gaaray.
Dhamaantiin waad mahadsan tihiin! Runtii waxaad ka dhigatay ciidaan mid layaableh aniga.
Casho Kirismas ah
25, 2006 at 12: 08 AM
Waxaan kugu hambalyaynayaa dhamaan shaqooyinka adag ee aad bixisay. Waan ku raaxaystaa aqrinta balooggaaga, xitaa haddii aanan faallo ka bixin toddobaad kasta. Ciidaha wanaagsan iyo shaqada adag sii wad.